Somaliland: Xukuumadda Oo Ku Dhawaaqday Xaalad - #1Araweelo News Network
Somaliland: Xukuumadda Oo Ku Dhawaaqday Xaalad
Hargeysa(ANN)-Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa ku dhawaaqday xaalad hor leh oo qaylo dhaan ah, taas oo u baahn in dad gaadhaya ku dhowaad Hal Milyan oo qof ay lagama maarmaan tahay in la gaadhsiiyo waxay cunnaan, Baad iyo Biyo.
Madaxeyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ah guddoomiyaha guddida Madaxweyne dhowaan ku dhawaaqay, ayaa sharaxaad ka bixiyay xaaladda ba’an ee Abaarta ka jira deegaamo Somalialnd ah oo u baahan cunto, Biyo iyo baad, kaddib Abaar saamayn ku yeelatay nollosha dadka xoollaha iyo deegaankaba.
Cabdiraxmaan Saylici oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dalka ka jirto xaalad abaareed oo baahsani, taas oo saamaysay dad tiradoodu gaadhayso 810,000 (Siddeed boqol iyo toban kun) oo qof.
Guddida uu hoggaaminayo Saylici, ayaa sheegay in ay dalka ka jirto xaalad abaareed oo saamaysay gobollada iyo degmooyinka dalka.
War-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku faahfaahiyeen baaxadda abaarta iyo tallaabooyinka guddi ahaan u qorshaysan iyo baaqyada ay dirayaan, waxana uu warsaxaafadeedkaasi u dhignaa sidan:
“K ddib markii roobabkii Gu’gu uu teel teel ku ahaa qayb ka mida dalka, roobabkii Deyrtana aan la helin waxa marag ma doon ah in dalka ay ka jirto xaalad abaareed.
· Howl-galinta guddida farsamo oo ka kooban wasaaraddaha xubnaha ka ah guddida abaarta iyo hay’adda NADFOR oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka ka jirta guud ahaan, kana soo diyaariyay war-bixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda abaarta ee dalka.
· Dayactirka iyo kicinta ceelasha dhaadheer ee biyaha kuwaasi oo ay tiradoodu dhamayd 41 ceel, kuwaasi oo ku yaalay goobaha biyo yaraantu ay ka jirto gaar ahaan gobolada Bari.
· Waxa biyo-dhaamis ay ka bilaabeen booyadaha dawladdu gobolada Togdheer, Sanaag, Sool iyo Maroodijeex
· Waxa hay’adda NADFOR diyaarisay kayd-raashin ah oo loogu talo galay dadka abaartu saamaysay.